Global Voices teny Malagasy · 22 Jolay 2010
22 Jolay 2010
Tantara tamin'ny 22 Jolay 2010
Thailand: Korontana ho an'ny Praiminisitra ny hafatra an-tsoratra amin'ny finday
Azia Atsinanana 22 Jolay 2010
Nandefa simaiso tamin'ireo mpampiasa finday Thai an-tapitrisany ny Praiministra Thailand Abhisit Vejjajiva rehefa nandray ny asany tamin'ny 2008, nangataka ny firaisan-kina. Ankehitriny, izy miatrika ny heloka amin'ny kolikoly tamin'ny nahazoany ny "fanomezana" avy amin'ireo orinasa mpandraharaha ara-pifandraisan-davitra. Voampanga ihany koa izy amin'ny fanitsahana ny zo manokan'ny mpanjifa finday
Maraoka: Zazakely iray mpitoraka blaogy miarahaba an'izao tontolo izao
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Jolay 2010
Nanomboka nanana blaogy i Salma teo amin'ny fahaenin-taonany mba ahafahany mifandray amin'ny namany sy ny fianakaviany.Tia manoratra tantara fohy sy mizara ny olana mahazo azy isan'andro any an-tsekoly amin'izao tontolo izao ity zaza Maraokana mpitoraka blaogy ity saingy eo imason'ny raiamandreniny avokoa izany.
Brezila: Herisetra mianjady isan'andro amin'ny vehivavy
Amerika Latina 22 Jolay 2010
Any Brezila, vehivavy 10 isan'andro no maty misy mamono. Ilay famonoana vehivavy tsy ela akory izay, nataon'ilay eritreretina ho rain-janany, sady mpiandry tsatokazo Breziliana tokony hanana ny hoaviny, dia nanainga adihevitra mikasika ny herisetra atao amin'ny vehivavy teo amin'ny tontolon'ny fitorahana blaogy.
Iran: Nakatona ho an'ny raharaha ireo tsena satria mbola mitohy ireo fitokonan'ny mpivarotra
Niditra tamin'ny herinandro faharoa amin'ny fitokonana anoherana ny fiakaran'ny hetra ireo mpivarotra ao amin'ny tsenaben'i Teheran . Olon-tsotra maro mpampita vaovao no mitatitra izany tranga izany raha toa kosa ka mangina sy miezaka ny tsy miraharaha ny iray amin'ireo fitokonana lehibe indrindra tao anatin'ny 30 taona farany izao, ny haino aman-jery ofisialy .